Odeeffannoo Kaawuntii Raamsey afaan Oromoo | Ramsey County
Qabeenyota Eegumsaa fi Balaawwanii
Deggersaa fi Gargaarsa
Fayyaa fi wal'aansa fayyaa
Filannoo fi Filachuu
Tilmaama Qabeenya fi Gibiraa
Risaaykiliniin hojiirra akka oolu gochuu fi Balfa
Dandilee fi geejjiba
Laayibirarii Bulchiinsa Raamsee
Paarkiwwanii fi Bashannana
Nageenya uummataa fi seera
Hojiilee fi carraawwan tola oolaa
Waa’ee Bulchiinsa Raamsee
Baga gara marsariitii odeeffannoo Kaawuntii Raamsey afaan Oromootti nagaan dhuftan.
Fuulonni kanaa gadi jiran ogeessan gara afaan Oromootti hiikkaman garuu gara fuulota odeeffannoo sagantaa afaan Ingiliffaatin caalatti gadi-fageenya qabanitti geessuu mala. Turjumaana fuula kamiyyuu argachuudhaf, Google Translate yookan Bing Translator faayidaa irra ooluu danda'u.
Nuti yeroo hunda qabiyyee dabalataa afaan Oromootti hiikudhaaf hojjechaa jirra.
Ramsii kaawuntiin tajaajila hiika afaanii(Turjumaana) bilbilaan afaanota 170 kenna. Tajaajila kana argachuuf 651-266-8500 irratti bilbili. Keessumeessitoonni hojjattoota iddoo hunda jiranii fi warreen afaan siif hiiku waliin wal si qunnamsiisuun si gargaaru.
Tajaajilootaa fi sagantaalee
Qabeenyota eegumsaa fi balaa
Deggersaa fi Gargaarsa - nyaata, kiraa, kunuunsa daa'imaa, mana, maatilee, fayyaa sammuu, qacarrii, loltoota duraanii
Wiirtuwwan Tajaajilaa Bulchiinsa Ramsey, jirattoota tajaajilawwan bulchiinsicha keessatti argaman deggersa fuula fuulan kennamu, bakka hojii kompiitaraa beellama irratti hundaa’e, saanduqawwan dookumentii keessa kaa’an dabalatee tajaajilawwan gosa garaa garaa waliin wal isaan qunnamsiisa.
Bakkeewwanii fi sa'aatiwwan